नर्सको चाप्लुसी या चोखो माया ? | Knowledge & Fun Park
HomeUncategorizedनर्सको चाप्लुसी या चोखो माया ?
विवाह भएको धेरै भएको थिएन । हनिमुन पनि जानै थियो हामी । अलिक सोझो नै थिए म । लाज सरमले कामुक कुराहरुमा अलिक अग्रता नै लिन्थ्यो । त्यसैले होला केटाहरुले पनि बाटोमा कोहि केटी देख्नी बित्तिकै मलाई समातेर जिस्काउन थाल्थ्ये । रातको समय , चुकुल लगाएको थियो । बुढी र म भित्र खाटमा पल्टिराखेका थियौ । अनि बिस्तारै उनलाई भने,” अब त तिमीले बाबू,नानी खेलाउनी होला नि ”
उनमा लाज भन्नी कत्ती पनि थिएन । यस्ता यौनको विषय खुलेरै गर्न सक्थ्यी । सायद पढाइको विषय पनि त्यही भएर होला । हस्पिटलमा नर्स थिइ , सुरक्षित साधन पनि आफैले हस्पिटल बाट बोकेर आउथ्यी । उस्ले हातमा थमाउदा उल्टै मलाई लाज लाएर आउथ्यो । मलाई बाबा हुने रहर अत्ति नै थियो । त्यसैले उनलाई हनिमुन जाने कुरा राखे । उ सुरुमा त अप्ठ्यारो मानी तर मेरो रहरलाई पनि नाई भन्न सकिन ।
केही दिन पछि हामी लाग्यौ पोखरा शहर । प्रकृतिले भरिपूर्ण शहर , मन नै लोभ्याउने शहर । त्यही प्राकृतिक सहरमा म आफ्नो प्रकृतिको रस पिउन जादै थिए । दिउँसो घुमफिर गरेपछी हामी lakeside को होटेलमा लाग्यौ । पहिले नै बुकिङ भैसकेको थियो । रिसेप्सनमा कुरा गरिसके पछि हामीलाई helper ले कोठामा पुर्याइदियो । झोला बिसायौ अनि खाना खान झर्यौ । खाना खाइवरी हामी तालको रात्री दृश्य हेर्न गयौ । फर्किदा त्यस्तै १० बजेको थियो होला । अनि हामी कोठामा आयौ न एकैछिनको विश्राम पछि हामी एक अर्कोमा लडिबुडी गर्न लाग्यौ !!! कहिले मेरो माथी उनी त कहिले उ माथी म ।
हामी केही दिन पछि घर फर्कियौ । उनको पनि छुट्टी कम नै थियो । त्यही भएर हामी धेरै दिन भुल्न पाएनौ !! त्यहि पनि म मा खुसी नै थियो । किनकी अबको ९ महिना पछि म बाबा बन्नेवाला छु अनि मेरी आमा हजुरआमा । नर्स उहीँ थिइ त्यही भएर मलाई भन्ने गर्थी -” मेरो स्वास्थ्यको चिन्ता नगर्नुहोला , समस्या परेमा म आफै डाक्टरसंग सम्पर्क गर्ने छु । ” उनको यहि कुरा मलाई साह्रै मन पर्थ्यो । आफ्नो हेरचाहा आफै गर्न सक्ने थिई । त्यही भएर पनि म अलिक ढुक्क थिए !!
एकदिनको कुरा हो । उनले हस्पिटलमा night duty छ भन्दै थिइ । म बाहिर गएको समय थियो अनि आमा गाउँ जानुभएको थियो । म घर फर्किन समय लाग्ने भएर खाना खाएर जाउ भने । अनि म घर फर्किए । उनी थिइनन् । म किचनमा गएर खाना आफै पस्केर खाए । अनि सुत्न कोठामा गए । सामान छरपस्ट थिए । यता उता सारेर सुते । विहान पनि ढिला उठेछु । बुढीलाई फोन हाने mobile switch off थियो । मन आत्तियो । खिन्न भइ भइ कोठा मिलाउन तिर लागे । सफा गर्दा एउटा कुनामा tablet देखे । हेरेको iPill लेखिएको थियो । म झस्किए । कुनै बेला एउटा साथीलाई मैले hospital बाट ल्याइदिएको थिए। त्यसैले त्यस्को पयोग मलाई राम्ररी थाहा थियो । अनि सोछे, hospital को फोहोर झुक्किएर पर्यो होला ।
सिरानी मिलाउदै थिए । अनि एउटा कागज भेट्टाए । खोलेर हेरे त्यहा लेखिएको थियो, “हाम्रो विवाह तपाईको जबर्जस्तीले गर्दा भएको हो । मलाई तपाईमा कुनै interest छैन् । र म तपाईंको बच्चाको आमा बन्नु पनि छैन् । मैले औषधि सेवन गरिसकी थिए । जून हजुरलाई सुनाउन अनि जरुरी थिएन । म धेरै टाढा पुगिसकेको हुनेछु यो पत्र तपाईले पढिसक्दा । त्यसैले मलाई खोज्ने प्रयास नगर्नुहोला ।”
म झसङ्ग भए । छागाबाट कसैले खसालेको झै माने । हिजो रातीको ह्याङ पनि सकिएकी थिएन । साथीले म नेपाल छोड्दै छु अब तिमीहरुसंग अन्तिम बसाई होला भन्दै एक्कासी पार्टी दिएको थियो । मलाई खाना खान पनि मन लागेन । अनि आमालाई फोन गरे र सब सुनाए । आमाको बोली बन्द भयो । ठुल्बालाई फोन गरेर आमाको ख्याल राख्न भने । तल होटेलमा खाना भनेको थिए । cancel गरे । अनि त्यही साथीलाई फोन गरे ,”तेरो पार्टी मेरो लागि चुना साबित भयो यार ” यस्तो भन्दै दुख पोखे ।
साथीले सुरुमा निकै चाख लाएर सुन्यो । मेरो मन बुझ्ने धन्न यहि एउटै छ लाग्यो । अनि बिस्तारै मुख खोल्यो,” मैले त पहिल्यै भनेको थिए नि नि नर्स संग बिहे नगर भनेर । अनि तैले मानिनस् अब के गर्छस् ? बिहे पनि जबर्जस्ती बाउआमालाई फकाएर केटीको मन्जुरी बिना गरिस् अब परिणाम भोग । ” यति भन्दै उस्ले फोन काट्यो ।
हुन त त्यस्ले पनि मलाई आफ्नो कुराहरु सब सुनाउथ्यो । त्यहि भएर त हो उस्लाई म पनि कुरा राख्न नहिच्किचाएको !! अनि सोचे फोन किन काट्यो ? फेरि फोन हाने, मोबाइल switch off भन्यो । हुन त हिजो नेपाल छोड्दै छु भन्दै थियो । सायद वोडर कट्यो होला । अनि एक्कासी सझिए त्यस्ले अलिक पहिला भनेको कुरा,” मेरो एउटी नर्स संग love पर्या छ यार …..”
फेरि सम्झिए “त्यो नर्सको बिहे हुने भयो यार………”
अनि फेरि सम्झिए हिजो राती पार्टीको बेला भनेकी कुरा,”सायद हनिमुन पनि गइ होली, अब कि बुढालाई उडाउछु कि बुढीलाई भगाइदिन्छु…………”